9 Tallaabo oo Fahad ku caddeeynaya kiiska Ikraan | KEYDMEDIA ONLINE
9 Tallaabo oo Fahad ku caddeeynaya kiiska Ikraan
Tallaabooyinkii is xigxigay oo ay qaadeen Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayaa caddeyn ugu filan garsoorka iyo hay’adaha barista, si ay go’aan uga gaaraan kiiska Ikraan Tahliil Faarax, waa sida uu qabo Xildhibaan Fiqi.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Amniga Dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi, oo ka mid ahaa Xildhibaanno faro ku tiris ah oo afartii sano ee la soo dhaafay si weyn kaga soo hor jeeday qaabkii ay wax u wadeen Kooxda Farmaajo iyo Fahad hoggaamiyaan aya sheegay in isku geynta Sagaal tallaabo oo ay qaadeen kooxda waqtigu ka dhamaaday ay caddaymo marag ma doonto ah u tahay in Ikraan ku maqan tahay gacanta hoggaankii hore NISA & Villa Somalia.
Sagaalkaan qodob oo ah kuwo hirgalay maalmihii na-weydaartay ayuu Xildhibaan Fiqi, ku tilmaamay in ay caddeyn buuxda u yihiin in kiiska Ikraan Tahliil uu ku cadyahay Madaxweynihii hore, Farmaajo iyo Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Fahad.
Qoraalkii NISA soo galisay barta facebook-ga uu ku leeyahay SNTV oo lagu qiray dhimashada Ikraam, looguna tacsiyeeyey ehelkii Ikraam.
48 saac oo raysulwasaaruhu u qabtay agaasimaha NISA in xogta Ikraam uu ku keeno oo ka dhaqangeli weyday dhanka Fahad Yaasiin.
Oday Farmaajo oo arrin aan u oolin soo salooshay iskuna dayay in uu indhaha ka weeciyo kiiska Ikraam asagoo furey buuq siyaasadeed.
Agaasimihii NISA oo kiiska Ikraam darteed xilka looga qaaday
Farmaajo oo Isku dayey in uu qaab suuq madow ah diyo uga bixiyo dilkii Ikraam asagoo aan marna qaabilin hooyada Ikraam.
Kooxda dilaaga ah ee Shabaab oo si la yaab leh isaga fogaysay dilka Ikraam ee dhankeeda loo soo baasay.
Caburin iyo Jirdil lagula kacay dhallinyaro banaanbax ku dalbanaysay in Ikraam ay cadaalad hesho.
Baabuurkii gabadha lagu afduubay oo la sheegayo in gobol kale la geeyey si baaritaanka looga qariyo.
Farmaajo oo ku gorgortamaya in kiiska guddi loo saaro, lagana daaayo maxkamadda.
Farmaajo ayaa geed dheer iyo mid gaaban u koraya siduu u dabooli lahaa kiiskaan, taas oo uu uga gol-leeyahay inuu gacmaha cadaadda ka badbaadiyo eedeysane Fahad Yaasiin oo la rumeysan yahay inuu masuul ka yahay af-dubka iyo dilka Ikraan.
Kooxda Farmaajo, waxa ay abuurayaan fowdo siyaasadeed, taas oo horseedi karta in Caasimaddu marti aliso dagaallo kharaar, si uu mesha uga baxan eedaha loo heysto hoggaankii hore ee NISA.